Ankitsim-po: maika ny any ambanivohitra | NewsMada
Raha ny tontolo iainana no asian-teny eto Madagasikara, iaraha-mahita sy miaina ny zava-misy. Nilaza ny MNP (Madagascar National Park) fa nihena ny ala ripaka tamin’ny taon-dasa. Ny tena marina, manomboka tsy misy ny ala hodorana, na efa tsy misy intsony any amin’ny faritra maro. Miaraka amin’izany fahapotehan’ny tontolo iainana izany ny fahantrana lalim-paka any amin’ny kaominina ambanivohitra maro.
Nanolo-kevitra ny Crem (lahatsoratra eo ambony) fa tokony hanangana izany “Fonds souverain” izany ny fanjakana malagasy, tsy hiandry sy hanantena lava fanampiana avy any ivelany. Ny tena marina koa, trosaina ny ampahany maro amin’ireny vola ireny. Misy tetikasa eto, tsy laharam-pahamehana loatra nefa andaniam-bolabe, amina tapitrisa dolara maro. Ny any amin’ireo kaominina ambanivohitra ireo anefa, 100 000 na 200 000 dolara, hahavitana tetikasa maro, indrindra ny lalana, ny hopitaly, ny sekoly, ny herinaratra, ny fambolena sy ny fiompiana.
Andraikitry ny fanjakana feno ny mametraka izany, tsy hiandrasana vahiny, saingy ny vahiny indray no taitra sy malahelo ny mahazo ireo mponina maro anisa any ambanivohitra, mitondra fanampiana ho azy ireny. Nofinofy ny ady amin’ny fahantrana raha tsy mivoatra ny any ambanivohitra amin’izao taonjato izao.